24.03.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– रूहानी सेवा गरेर आफ्नो र अरूको कल्याण गर , बाबासँग सच्चा दिल राख्यौ भने बाबाको दिलमा चढ्छौ।”
देही-अभिमानी बन्ने मेहनत कसले गर्न सक्छ? देही-अभिमानीको निशानी सुनाऊ?
जसको पढाइसँग र बाबासँग अटुट प्यार छ उनीहरूले देही-अभिमानी बन्ने मेहनत गर्न सक्छन्। उनीहरू शीतल हुन्छन्, कसैसँग पनि धेरै कुरा गर्दैनन्, उनीहरूको बाबासँग प्यार रहन्छ, चलन धेरै रोयल हुन्छ। उनीहरूलाई नशा रहन्छ– हामीलाई भगवानले पढाउनु हुन्छ, हामी उहाँका सन्तान हौं। उनीहरू सुखदायी हुन्छन्। हर कदम श्रीमत अनुसार उठाउँछन्।
बच्चाहरूले सेवाको समाचार पनि सुन्नुपर्छ फेरि जो मुख्य-मुख्य महारथी सेवाधारी छन् उनीहरूले राय निकाल्नुपर्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ– सेवाधारी बच्चाहरूको नै विचार सागर चल्छ। मेलाको वा प्रदर्शनीको उद्घाटन कससँग गराउने! कुन-कुन प्वाइन्ट सुनाउनु पर्छ। शंकराचार्य आदिले यदि तिम्रो यो कुरालाई बुझे भने भन्छन् यहाँको ज्ञान त धेरै उच्च छ। यिनलाई पढाउने कोही बुद्धिमान् हुनुपर्छ। भगवानले पढाउनु हुन्छ, यो त उनीहरूले मान्छैनन्। त्यसैले प्रदर्शनी आदिको उद्घाटन गर्न जो आउँछन् उनीहरूलाई के-के सम्झाउने, त्यो समाचार सबैलाई बताउनु पर्छ वा टेपमा छोटकरीमा भर्नुपर्छ। जसरी गंगेले शंकाराचार्यलाई सम्झाइन्, यस्ता-यस्ता सेवाधारी बच्चाहरू त बाबाको दिलमा चढ्छन्। हुन त स्थूल सेवा पनि हुन्छ तर बाबाको ध्यान रूहानी सेवामा जान्छ जसले धेरैको कल्याण गर्छन्। कल्याण त हरेक कुरामा छ नै। यदि योगयुक्त भएर बनाएमा ब्रह्माभोजन बनाउँदा पनि कल्याण छ। यदि यस्तो योगयुक्त भोजन बनाउनेवाला भए भने भण्डारामा धेरै शान्ति हुन्छ। यादको यात्रामा रहून्। कोही पनि आयो भने तुरुन्त उनलाई सम्झाइयोस्। बाबा बुझ्न सक्नुहुन्छ– सेवाधारी बच्चाहरू को-को छन्, जसले अरूलाई सम्झाउन सक्छन् उनीहरूलाई नै सेवामा बोलाइन्छ पनि। सेवा गर्नेवाला नै बाबाको दिलमा चढ्छन्। बाबाको सारा ध्यान सेवाधारी बच्चाहरूतर्फ नै जान्छ। कतिले त सम्मुख मुरली सुने पनि केही बुझ्न सक्दैनन्। धारणा हुँदैन किनकि आधा कल्पको देह-अभिमानको बिमारी धेरै कडा छ। त्यसलाई मेटाउनको लागि धेरै कम छन् जसले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छन्। धेरैले देही-अभिमानी बन्ने मेहनत गर्न सक्दैनन्। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! देही-अभिमानी बन्नु धेरै मेहनत छ। ठीकै छ, कसैले चार्ट भरेर पनि पठाउँछन्, तर पूरा पठाउँदैनन्। फेरि पनि केही ध्यान त रहन्छ। देही-अभिमानी बन्ने कुरामा धेरै कमको ध्यान रहन्छ। देही-अभिमानी धेरै शीतल हुन्छन्। उनीहरू त्यति बढी कुराकानी गर्दैनन्। उनीहरूको बाबासँग यस्तो प्यार रहन्छ, कुरै नसोध। आत्मालाई यति खुसी हुनुपर्छ जुन कहिल्यै कुनै मनुष्यलाई हुँदैन। यी लक्ष्मी-नारायणलाई त ज्ञान हुँदैन। ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई छ, जसलाई भगवानले पढाउनु हुन्छ। भगवानले हामीलाई पढाउनु हुन्छ, यो नशा पनि तिमीहरूमा एक-दुईलाई रहन्छ। त्यो नशा भयो भने बाबाको यादमा रहन्छन्, जसलाई देही-अभिमानी भनिन्छ। तर त्यो नशा रहँदैन। यादमा रहने चलन धेरै रोयल हुन्छ। हामी भगवानका बच्चा हौं। त्यसैले गायन पनि छ– अतीन्द्रिय सुख गोप-गोपीहरूसँग सोध, जसले देही-अभिमानी भएर भगवानलाई याद गर्छन्। याद गर्दैनन्, त्यसैले शिवबाबाको दिलमा चढ्दैनन्। शिवबाबाको दिलमा भएनन् भने दादाको दिलमा पनि चढ्न सक्दैनन्। उहाँको दिलमा रहन्छन् भने अवश्य पनि यिनको दिलमा पनि हुन्छन्। बाबाले हरेकलाई जान्नुहुन्छ। बच्चाहरूले स्वयं पनि सम्झन्छन्– हामी के सेवा गर्छौं। सेवाको सोख बच्चाहरूमा धेरै हुनुपर्छ। कसैलाई सेन्टर जमाउने सोख पनि रहन्छ। कसैलाई चित्र बनाउने सोख रहन्छ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ– मलाई ज्ञानी तू आत्मा बच्चाहरू प्रिय लाग्छन्, जो बाबाको यादमा पनि रहन्छन् र सेवा गर्नको लागि पनि दौड-धूप गरिरहन्छन्। कसैले त बिल्कुलै सेवा गर्दैनन्, बाबाले भनेको पनि मान्दैनन्। बाबाले त जान्नुहुन्छ नि– कहाँ कसलाई सेवा गर्नुपर्छ। तर देह-अभिमानको कारणले आफ्नो मतमा चल्छन् त्यसैले उनीहरू दिलमा चढ्दैनन्। अज्ञान कालमा पनि कुनै बच्चा खराब चलनको हुन्छ भने पिताको दिलमा रहँदैन। उनलाई कपूत सम्झिन्छ। सङ्गदोषमा खराब हुन पुग्छन्। यहाँ पनि जसले सेवा गर्छन् उनीहरू नै बाबालाई प्रिय लाग्छन्। जसले सेवा गर्दैनन् उनीहरूलाई बाबाले प्यार कहाँ गर्नुहुन्छ र। सम्झनुहुन्छ तकदिर अनुसार नै पढ्छन्, फेरि पनि प्यार कसमाथि रहन्छ? त्यो त कायदा छ नि। राम्रा बच्चाहरूलाई धेरै प्यारले बोलाएर भन्नुहुन्छ– तिमी धेरै सुखदायी छौ, तिमी पिता स्नेही छौ। जसले बाबालाई याद नै गर्दैनन् उनीहरूलाई पिता स्नेही कहाँ भनिन्छ र। दादा स्नेही बन्नु छैन, स्नेही बन्नु छ बाबाको। जो बाबाको स्नेही छ उसको बोलचाल धेरै मीठो सुन्दर हुन्छ। विवेकले यस्तो भन्छ– समय भए पनि शरीरको कुनै भरोसा कहाँ छ र। बस्दा-बस्दै दुर्घटना हुन्छ। कोही हर्टफेल हुन्छन्। कसैलाई रोग लाग्छ, मृत्यु त अचानक हुन्छ नि, त्यसैले श्वासको भरोसा छैन। प्राकृतिक प्रकोप पनि अहिले अभ्यास भइरहेको छ। समय नहुँदै बर्सात भयो भने पनि नोक्सान गरिदिन्छ। यो दुनियाँ नै दु:ख दिनेवाला हो। बाबा पनि यस्तो समयमा आउनु हुन्छ जब महान् दु:ख हुन्छ, रगतको नदी पनि बग्नु छ। कोसिस गर्नुपर्छ– हामीले आफ्नो पुरुषार्थ गरेर २१ जन्मको कल्याण त गरौं। धेरैमा आफ्नो कल्याण गर्ने नशा पनि देखिदैन।
बाबाले यहाँ बसेर मुरली चलाउनु हुन्छ तैपनि बुद्धि सेवाधारी बच्चाहरूतर्फ रहन्छ। अब शंकराचार्यलाई प्रदर्शनीमा बोलाएका छन्, नत्र यिनीहरू यसरी कहीं जादैनन्। धेरै घमण्डसँग रहन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई मान पनि दिनु पर्ने हुन्छ। माथि सिंहासनमा बसाउनु पर्छ। यस्तो होइन,सँगसँगै बस्न सक्छन्। होइन, सम्मान उनीहरूलाई धेरै चाहिन्छ। निर्मान भए भने फेरि चाँदी आदिको सिंहासन पनि छोड्छन्। बाबा हेर कस्तो साधारण रहनुहुन्छ। कसैले पनि जान्दैन। तिमी बच्चाहरूमा पनि कुनै बिरलैले जानेका छन्। कति निरहंकारी बाबा हुनुहुन्छ। यो त बाबा र बच्चाहरूको सम्बन्ध हो नि। जसरी लौकिक पिता बच्चाहरूसँग रहन्छन्, खान्छन्, खुवाउँछन्, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका पिता। संन्यासी आदिलाई बाबाको प्यार मिल्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– कल्प-कल्प हामीलाई बेहदका बाबाको प्यार मिल्छ। बाबाले फूल बनाउने धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ। तर ड्रामा अनुसार सबै त फूल बन्दैनन्। आजका धेरै राम्रा-राम्रा पनि भोलि विकारी बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– तकदिरमा छैन भने अरू के गर्न सकिन्छ। धेरैको चलन गन्दा हुन पुग्छ। आज्ञाको उल्लंघन गर्छन्। ईश्वरको मतमा पनि चल्दैनन् भने उनीहरूको के हालत होला। उच्च भन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ अरू त कोही छैन। फेरि देवताहरूको चित्रमा हेर्यौ भने यी लक्ष्मी-नारायण नै उच्च भन्दा उच्च हुन्। तर मनुष्यहरूले यो पनि जानेका छैनन्– यिनलाई यस्तो कसले बनायो। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई रचयिता र रचनाको ज्ञान राम्रोसँग बसेर सम्झाउनु हुन्छ। तिमीलाई त आफ्नो शान्तिधाम र सुखधाम नै याद आउँछ। सेवा गर्नेको नाम स्मृतिमा आउँछ। अवश्य पनि जो बाबाका आज्ञाकारी बच्चाहरू छन् उनीहरूतर्फ नै दिल जान्छ। बेहदका बाबा एकपल्ट नै आउनु हुन्छ। ती लौकिक पिता त जन्म-जन्मान्तर मिल्छ। सत्ययुगमा पनि मिल्छ। तर त्यहाँ यी बाबा मिल्नुहुन्न। अहिलेको पढाइबाट तिमी पद पाउँछौ। यो पनि तिमी बच्चाहरू नै जानेका छौ। बाबाबाट हामी नयाँ दुनियाँको लागि पढिरहेका छौं। यो बुद्धिमा याद रहनु पर्छ। छ धेरै सहज। सम्झ, बाबा खेलिरहनु भएको छ, अनायास कुनै आउँछ भने बाबाले तुरुन्त त्यहाँ नै उसलाई ज्ञान दिन थाल्नुहुन्छ। बेहदको पितालाई जानेका छौ? बाबा आउनु भएको छ पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउन। राजयोग सिकाउनु हुन्छ। हामीलाई नै सिकाउनु हुन्छ। विश्व स्वर्ग थियो। जहाँ यी देवी-देवताहरूको राज्य थियो। अहिले त नर्क छ। नर्कबाट फेरि स्वर्ग बाबाले नै बनाउनु हुन्छ। यस्तो-यस्तो मुख्य कुरा कोही आयो भने उनीहरूलाई बसेर सम्झाऊ, उनीहरू कति खुसी हुन्छन्। केवल भन बाबा आउनु भएको छ। यो उही महाभारत लडाईं हो जुन गीतामा गाइएको छ। गीताको भगवान आउनु भएको थियो, गीता सुनाउनुभको थियो। के को लागि? मनुष्यलाई देवता बनाउन। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ– म बाबालाई र वर्सालाई याद गर। यो दु:खधाम हो। यत्ति बुद्धिमा याद रह्यो भने पनि खुसी रहन्छ। हामी आत्माहरू बाबाको साथमा शान्तिधाम जानेवाला छौं। फेरि त्यहाँबाट पार्ट खेल्न पहिला-पहिला सुखधाममा आउने छौं। जसरी कलेजमा पढ्छन् भने सम्झन्छन् हामी यो पढाइ पढेर यो-यो बन्छौं। बेरिस्टर बन्छौं वा पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट बन्छौ, यति पैसा कमाउने छौं। खुसीको पारा चढिरहन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई पनि यस्तो खुसी रहनु पर्छ। हामी बेहदका बाबाबाट यो वर्सा पाउँछौ फेरि हामी स्वर्गमा आफ्नो महल बनाउने छौं। सारा दिन बुद्धिमा यो चिन्तन रह्यो भने खुसी पनि रहन्छ। आफ्नो र अरूको कल्याण गरौं। जुन बच्चाहरूसँग ज्ञान धन छ उनीहरूको कर्तव्य हो दान गर्नु। यदि धन छ, दान गर्दैनौ भने उनीहरूलाई कंजूस भनिन्छ। उनीहरूको पासमा धन हुँदा-हुँदै पनि मानौं छँदै छैन। धन छ भने दान अवश्य गरुन्। राम्रा-राम्रा महारथी बच्चाहरू जो छन् उनीहरू सदैव बाबाको दिलमा चढिरहन्छन्। कसै-कसैको लागि ख्याल रहन्छ– यो सायद चल्न सक्दैन। परिस्थिति यस्तो छ। देहको अहंकार धेरै चढेको छ। कुनै पनि समयमा हात छोड्न सक्छ र आफ्नो घरमा बस्न सक्छ। मुरली धेरै राम्रो चलाए पनि देह-अभिमान धेरै छ, अलिकति पनि बाबाले सावधानी दिनु भयो भने छोड्छन्। नत्र गायन छ– प्यार करो चाहे ठुकराओ... यहाँ बाबाले ठीक कुरा गरे पनि रिसाउँछन्। यस्ता-यस्ता बच्चाहरू पनि छन्, कोही त भित्र धेरै कृतज्ञ (आभारी) हुन्छन्, कोही भित्र जलेर मर्छन्। मायाको देह-अभिमान धेरै छ। कति यस्ता पनि बच्चाहरू छन् जसले मुरली सुन्दै-सुन्दैनन् र कोही भने मुरली बिना रहन सक्दैनन्। मुरली सुन्दैनन् भने आफ्नै हठ हो, ममा त ज्ञान धेरै छ तर हेर्दा केही पनि हुँदैन।
त्यसैले जहाँ शंकाराचार्य आदि प्रदर्शनीमा आउँछन्, सेवा राम्रो हुन्छ भने त्यो समाचार सबैलाई पठाउनु पर्छ, जसले गर्दा सबैलाई थाहा होस् कसरी सेवा भयो अनि उनीहरूले पनि सिक्छन्। यस्तो-यस्तो सेवाको लागि जसको ख्याल आउँछ उनीहरूलाई नै बाबाले सेवाधारी सम्झनुहुन्छ। सेवामा कहिले थाक्नु छैन। धेरैको कल्याण गर्नु छ नि। बाबाको मनमा त यही रहन्छ, सबैलाई यो ज्ञान मिलोस्। बच्चाहरूको पनि उन्नति होस्। सधैं मुरलीमा सम्झाइरहनु हुन्छ– यो रूहानी सेवा मुख्य हो। सुन्नु र सुनाउनु छ। सोख हुनुपर्छ। ब्याज लगाएर सधैं मन्दिरमा गएर सम्झाऊ– यी लक्ष्मी-नारायण कसरी बने? फेरि कहाँ गए? कसरी राज्य-भाग्य पाए? मन्दिरको ढोकामा गएर बस। कोही पनि आउँदा भन, यी लक्ष्मी-नारायण को हुन्, यिनको यहाँ कहिले राज्य थियो? हनुमान पनि जुत्तामा गएर बस्थे नि। त्यसको पनि रहस्य छ नि। दया आउँछ। सेवाको युक्तिहरू बाबाले धेरै बताउनु हुन्छ, तर व्यवहारमा धेरै कमले मात्रै ल्याउँछन्। सेवा धेरै छ। अन्धाहरूको लठ्ठी बन्नु छ। जसले सेवा गर्दैनन्, बुद्धि सफा रहँदैन भने फेरि धारणा पनि हुँदैन। नत्र सेवा धेरै सहज छ। तिमी यो ज्ञान रत्नहरूको दान गर्छौ। कुनै धनी मानिस आयो भने भन हामी हजुरलाई यो सौगात दिन्छौं। यसको अर्थ पनि हजुरलाई सम्झाउँछौं। यी ब्याजहरूको बाबालाई धेरै कदर रहन्छ। अरू कसैलाई यति कदर रहँदैन। यिनीहरूमा धेरै राम्रो ज्ञान भरिएको छ। तर कसैको तकदिरमा छैन भने बाबाले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ। बाबालाई र पढाइलाई छोड्नु– यो त ठूलो भन्दा ठूलो आत्मघात हो। बाबाको बनेर फेरि छोडपत्र दिनु– यो जस्तो महान् पाप कुनै हुँदैन। ऊ भन्दा नीच अरू कोही हुँदैन। बच्चाहरू श्रीमतमा चल्नुपर्छ नि। तिम्रो बुद्धिमा छ– हामी विश्वको मालिक बन्नेवाला छौं, कम कुरा हो र। याद गर्यौ भने खुसी पनि रहन्छ। याद रहेन भने पाप भस्म हुने छैनन्। एडाप्ट भएपछि खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। तर मायाले धेरै विघ्न पार्छ। कच्चालाई गिराइदिन्छ। जसले बाबाको श्रीमत नै लिदैनन् भने उनीहरूले के पद पाउलान्। थोरै मत लियो भने फेरि यस्तै कम पद पाउँछन्। राम्रो मत लियो भने उच्च पद पाउँछन्। यो बेहदको राजधानी स्थापन भइरहेको छ। यसमा खर्च आदिको कुनै कुरा छैन। कुमारीहरू आउँछिन् सिकेर धेरैलाई आफू समान बनाउँछिन्, यसमा फी आदिको कुरा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिन्छु। म स्वर्गमा पनि आउँदिन। शिवबाबा त दाता हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई खर्च के दिन्छौं। यिनले सबै कुरा उहाँलाई दिए, वारिस बनाए। बदलामा हेर राजाई मिल्छ नि। यी पहिलो-पहिलो उदाहरण हुन्। सारा विश्वमा स्वर्गको स्थापना हुन्छ। एक पैसा पनि खर्च हुँदैन। अच्छा!
मीठे-मीठे सिकीलधे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बापदादाको याद-प्यार एवं गुडमर्निङ्ग। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।।
१) पिता स्नेही बन्नको लागि धेरै-धेरै सुखदायी बन्नु छ। आफ्नो बोलचाल धेरै मीठो रोयल राख्नु छ। सेवाधारी बन्नु छ। निरहंकारी बनेर सेवा गर्नु छ।
२) पढाइ र बाबालाई छोडेर कहिल्यै पनि आत्मघाती महापापी बन्नु छैन। मुख्य हो रूहानी सेवा, यस सेवामा थाक्नु छैन। ज्ञान रत्नहरूको दान गर्नु छ, कञ्जुस बन्नु हुँदैन।
म र मेरोपनलाई बली चढाउने सम्पूर्ण महाबली भव
हदका कुनै पनि व्यक्ति र वैभवहरूसँग लगाव– यो नै मरोपन हो। यस मेरोपनलाई र मैले गर्छु, मैले गरें.... यस मैपनलाई सम्पूर्ण समपर्ण गर्नेवाला अर्थात् बली चढ्नेवाला नै महाबली हो। जब हदका मैपन समर्पण हुन्छ, तब सम्पूर्ण वा बाबा समान बन्ने छौ। मैले गरिरहेको छु, होइन। बाबाले गराइरहनु भएको छ, बाबाले चलाइरहनु भएको छ। कुनै पनि कुरामा म को बदलामा नेचुरल भाषामा पनि बाबा नै आओस्, म शब्द होइन।
संकल्पमा यस्तो दृढता धारण गर, जसबाट सोचाइ र गराइ समान होस्।